Microsoft yakaburitsa inogadziridza yekambani Windows inoshanda sisitimu, Microsoft Office, uye zvimwe zvigadzirwa zvekambani nhasi wanhasi Kukadzi 2018 Patch Zuva.
Pfupiso yedu inongorodza ruzivo rune ruzivo kuti ruite sezviri nyore sezvinobvira kuti uchengetedze muongororwo, download zvinyorwa, tarisa pamusoro pehumwe humwe ruzivo, uye uite zvisarudzo zviri nani maererano nekuiswa kwekuvandudzwa.
Zvinokurudzirwa kuti iwe upiwe musimboti wako usati waisa chero mapepa. Zvekare zvakaratidza kakawanda kuti zvinyorwa zvingave nezvisina kunaka pamasikirwo uye kuti mabhakitiriro ndiyo nzira yakanakisisa kana iri kuuya kugadzika shure.
Mutungamiri wedu anonyora zvese zvakachengeteka uye zvisiri zvekuchengetedza izvo Microsoft yakabudiswa kubva muna January Patch Day. Chikwata chimwe nechimwe chakanyorwa nezita rayo, tsanangudzo, uye chibatanidza kuMicrosoft.
Isu tinonyora sei Windows zvigadzirwa uye mabhurawuza eMicrosoft anokanganiswa nekuvandudzwa kwemwedzi uno, kutumira zvinozivikanwa nyaya uye mazano ekuchengetedza. Iwe unowana ruzivo pane kurodha pasi uye kunyange kunongedzera kwakananga kune kurodha pasi pakupera kwechinyorwa.
Dzvanya paunotevera link kuti uchengetedze Excel spreadsheet inonyora zvese zvekuchengetedzwa kweMicrosoft zvakabudiswa munaFebruary 2018:
Microsoft yakaburitsa inogadziridza kune ese akatsigirwa mutengi uye server shanduro dze Windows.
Zvokuchengetedza zvekuchengetedza zviripo kune Microsoft Office, Adobe Flash, Microsoft Edge uye Internet Explorer zvakare.
zvose Windows masisitimu anokanganiswa neakasarudzika kushushikana.
Windows 7: 15 kudzvinyirira iyo 1 inoratidzirwa inotsanangurwa uye 14 inonzi yakakosha
Windows 8.1: 12 kudzvinyirira iyo 1 inonzi yakatsoropodza, gumi yakakosha, uye 10 ine mwero
Windows 10 version 1607: 17 kudzvinyirira iyo 1 inoratidzirwa inoratidzika uye 16 inonzi yakakosha
Windows 10 version 1703: 18 kudzvinyirira iyo 1 inoratidzirwa inoratidzika uye 17 inonzi yakakosha
Windows 10 version 1709: 19 kudzvinyirira iyo 1 inoratidzirwa inoratidzika uye 18 inonzi yakakosha
Windows Server 2008: 11 kudzvinyirira iyo 1 inonzi yakatsoropodza uye gumi yakarongwa yakakosha
Windows Server 2008 R2: 14 kudzvinyirira iyo 1 inonzi yakatsoropodza uye 13 yakarongwa yakakosha
Windows Server 2012 na2012 R2: 12 kudzvinyirira iyo 1 inonzi yakatsoropodza 11 inonzi yakakosha
Windows Server 2016: 17 kudzvinyirira iyo 1 inonzi yakatsoropodza uye gumi yakarongwa yakakosha
Internet Explorer 11: 2 ngozi, 1 inokosha, 1 inokosha
Microsoft Edge: 14 ngozi, 11 inokosha, 2 inokosha, 1 inononoka
KB4074588 -Cumulative Kugadziriswa kweWwww 10 shanduro 1709 yekuvaka 16299.248.
Mazita ekubvunzurudzwa apo nhoroondo dzevana dzinokwanisa kuwana InPrivate mode pane maAARM kunyange zvazvo kuongorora kwavo uye nhoroondo yekutsvaga kutumirwa kuvabereki vavo. Izvi zvinongowanikwa chete paMicrosoft account yevana vanogadziriswa vachishandisa basa reMicrosoft Family uye iro vabereki vakapa basa rekuita mabasa. Izvi zvinoshanda kuMicrosoft Edge neInternet Explorer.
Mazita anokonzerwa nekuita uye kusasva Internet Explorer windows.
Mazita anokonzerwa neIndaneti Explorer apo kudzvinyirira khiye yefusi kuisa mutsva mutsva mumabhokisi ekupindira mune shanduro.
Anotumira nyaya muInternet Explorer umo zvakasarudzwa zvinhu hazvigadzirise pasi pemamwe mamiriro.
Mhemberero inosangana apo vamwe vashandisi vangave vakaona nyaya dzichipinda mune mamwe mawebhusayithi pavanoshandisa zvikwangwani zvekambani dzekambani muMicrosoft Edge.
Mhinduro dzinokonzerwa neshandura Maitiro Maona zvirongwa zvinowanikwa panguva yekuvandudzwa.
Kero dzinoburitsa apo, mune mamwe magadzirirwo emahara, zviyero zveMitambo yeDirectX zvaisaziviswa kuita chimwe chikamu chechiratidziro chakamira.
Mhinduro dzinokonzera kunonoka paunoshandisa keyboard keyboard using Alt + Shift.
Mazita anokonzera apo magumo anoteerera anoteerera akadzorerwa ku stereo mushure mekutangazve.
Inovandudza uye inoderedza mamiriro ezvinhu apo mamwe maBluetooth keyboards anokanda makii panguva yekuona zvinhu.
Rinoruramisa mhepo inononoka kumagadziri ayo anotaura zvisina kunaka bheji yepamusoro yepamusoro.
Kero dzinoburitsa apo MMC application snap-ins - seSevhisi, Yemunharaunda Policy Admin, uye Printer Management - dzinotadza kumhanya kana Windows Defender Chikumbiro Kudzora (Mudziyo Guard) yakavhurwa. Iko kukanganisa iko "Chinhu hachitsigire ichi chivakwa kana nzira".
Inodzivirira kushandiswa kwePamberi-kugadzirwa Onesettings endpoint ye Windows Kugadzirisa kana kusaina kuyedzwa kuchigoneswa.
Kero dzinoburitsa iko kuiswa kwe Windows Server, vhezheni 1709 haigadziriswe otomatiki vachishandisa iyo Yega Yega Mashini Kushanda Kushanda (AVMA) ficha pane Hyper-V inomisikidzwa iyo yakaitwa.
Mairesi anoburitsa neOnline-rejista Inbox templates chimiro che UEV uko iyo Kurongwa Task yanga isina chaiyo inokonzeresa.
Kero dzinoburitsa apo mutengi weApp-V asina kuverenga mutemo weSyncOnBatteryEnabled pakaitwa mutemo uchishandisa Bumbiro reMutemo Chinhu (GPO).
Mazita ekubvunzurudza apo Sangano Rakatsigirwa kuti Ribvumira Purogiramu yeVhidhiyo yeV Client haigoni mubhidhiyo yeGroup Policy.
Mazita anokonzerwa apo data yomukoko wemushandisi iri mubhuku rekunyora haigadziri zvakanaka apo mamwe mapurisa eApp-V ari eboka rekubatanidza.
Inopa mamwe magwaro ekugadzirisa vatungamiri kuti vatore matanho, zvakadai sokusarudza kugadzirisa kwakakodzera kwepaApp-V yavo, kana pane mafaira akawanda ekugadzirisa imwe chete pasepa.
Kero dzinoburitsa neApp-V mapakeji ayo asiri iwo anoenderana nerejista kuona kuti anoshandisa kernel midziyo. Kugadzirisa nyaya yacho, takachinja registry virtualization kuti tishandise iyo yekutanga (isina-mudziyo) nzira nekumira. Vatengi vangada kushandisa iyo nyowani (kernel mudziyo) nzira yekunyoresa virtualization vanogona kuchinjira kwairi nekuisa kukosha kwakanyoreswa ku1:
Kuchengetedzwa kwekuvandudza kuMicrosoft Scripting Injini, Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Windows Tsvaga chinhu, Windows tsanga, Windows Kusimbiswa, Kuchengetedzwa kweDhidhiyo, Common Log File System mutyairi, uye iyo Windows kuchengetedza uye faira masisitimu.
KB4074591 -Cumulative Kugadziriswa kweWwww 10 Shanduro 1511 yekuvaka 10586.1417
Kero dzinoburitsa dzinokonzeresa masevhisi.exe kumira kushanda mushure mekushandisa iyo "Tsvaga chiratidzo chekuteedzera kune mumwe mushandisi muchikamu chimwe chete" rombo ku Windows Server 2012 R2 makomputa. Aya makomputa anobva apinda yekutanga kutenderera. Sisitimu inogona kuzivisa iyo SceCli chiitiko ID 1202 ine kukanganisa 0x4b8. Iyo inogona zvakare kuzivisa iyo Yekushandisa Chikanganiso chiitiko ID 1000 ine yekukanganisa module zita scesrv.dll uye yekusiyanisa kodhi 0xc0000409. Iyi rombo yakatanga kuunzwa mu Windows Sevha 2016.
Kero dzinoburitsa apo MMC application snap-ins - seSevhisi, Yemunharaunda Policy Admin, uye Printer Management - dzinotadza kumhanya kana Windows Defender Chikumbiro Kudzora (Mudziyo Guard) yakavhurwa. Iko kukanganisa "Chinhu hachitsigire ichi chivakwa kana nzira."
Mazano ekubvunzwa ne URL anotorazve muIndaneti Explorer.
Mhinduro dzinoshandiswa ne browser Zviri kuenderana Tarisa zvirongwa zvinoitika panguva yekuvandudzwa.
Zvekuchengetedza zvinogadziridza kuMicrosoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Windows Tsvaga chinhu, Windows Kernel, Mudziyo Wevarindi, Windows chengetedzo uye mafaera masisitimu, Akajairika Log File Sisitimu mutyairi, uye Microsoft Scripting Injini.
KB4074590 - Cumulative Kugadziriswa kwe Windows 10 Version 1607 kuvaka 14393.2068
Mazita anokonzerwa nechekodhi yakagadziriswa iri mumasangano akazarurwa achishandisa Enterprise Mode Site List kuti adzokere kubva kuMicrosoft Edge kuenda kune Internet Explorer.
Mazita anokonzera nekupa maikirwo machero neInternet Explorer.
Inotaura nyaya yakabatana-script yakakonzera Internet Explorer kurega kushanda mune dzimwe nguva.
Mazita anokonzerwa neInternet Explorer apo kudzvinyirirwa kweChinesi rekutsvava kuisa mutsva mutsva mumabhokisi ekupinza mubasa.
Mazita anokonzerwa neshandisi Maonero Maonero ezvakaitika panguva yekuvandudzwa.
Kero dzinoburitsa apo data telemetry yanga isingakwanise kurongedzwa uchishandisa UTC nekuda kwenzvimbo dzekufambidzana dzinodzivirira kupinda kune maseva anodiwa eCRL.
Mazita anokonzerwa apo kunokera muPMIO apo kuvhara mazano uye kubudiswa kunogona kukonzera nzira dzose dziripo kuti dzishayiwe.
Mazita anokonzera apo ganda rekushandisa CPU throttles pavanenge vachimhanya IIS.
Inovandudza Microsoft HoloLens CPU Microcode kuti igadzirise kuchengetedzeka CVE-2017-5715 - Bazi rejekiseni jekiseni. Kuisa iyi KB yeHeroLens inoshanda ese akakodzera OS uye Microcode zvinyorwa. Ona Advisory 180002 kune rumwe ruzivo.
Mazita anokonzera apo, mushure mekuisa KB4057142 kana KB4056890 pane se SMB server, kupinda mafaira mumakanho ezvinyorwa zvitsva kana kuti mapurisa ekukwirira kweputi akabatwa pane seva angakundikana. Iko kukanganisa kuri "ERROR_INVALID_REPARSE_DATA". Somuenzaniso, chiratidzo ichi chinogona kuonekwa:
Kugadzirisa mimwe mitemo yeboka uchishandisa GPMC kana AGPM 4.0 inogona kukundikana nemhedzisiro "Iyo data iripo mune yekudzoreredza buffer haina basa. (Kunze kubva kuHRESULT: 0x80071128) ".
Zvekuchengetedza zvinogadziridza kuMicrosoft Edge, Internet Explorer, Adobe Flash Player, Microsoft Windows Tsvaga Chikamu, Windows Kernel, Dhizaina Chipenga, Yakajairwa Log Faira System Dhiraivha, uye Windows kuchengetedza uye faira masisitimu.
KB4074592 - Cumulative Kugadziriswa kwe Windows 10 Version 1703 kuvaka 15063.909.
Mazita akakurukurwa nechechina chekutsvaga chiri mumasangano akazarurwa achishandisa Enterprise Mode Site List kuti adzokere kubva kuMicrogan Edge kuenda kune Internet Explorer.
Mazita anokonzera nekupukunyuka kuburikidza nekushanda kwemakambani kuMicrosoft Edge.
Mazita anokonzera nekutanga mafaira uchishandisa zvidzitiro zvakabatana muIndaneti Explorer.
Mazita anokonzera nekupa mavara machero muInternet Explorer.
Kero dzinoburitsa apo iyo certutil.exe -MergePfx isingaite kuburitsa file yakasanganiswa yeEFF yezvitupa zvakawanda zveV1.
Mazita anokonzera apo kuburitsa neUnited Write Filter (UWF) kunotungamirirwa kunogona kutungamirira kukanganisa kukanganisa 0xE1 mumashandi akabatanidzwa, zvikurukuru kana uchishandisa USB HUB.
Inovandudza kushanda kwaIntel vatoriji vane Hardware Hardware-P-States (HWP) yakagadzirirwa.
Kero dzinoburitsa apo vatengi dzimwe nguva vanoona meseji yekukanganisa "Pane chakashata" mushure mekupedzisa kunze kwebhokisi.
Kuchengetedzwa kwekuvandudza kuMicrosoft Scripting Injini, Microsoft Edge, Internet Explorer, Microsoft Windows Tsvaga chinhu, Windows Kernel, Mudziyo Wevarindi, Windows chengetedzo uye mafaera masystem, uye Akajairwa Log File System mutyairi
KB4074593 - Windows Yakapetwa 8 Standard
KB4074594 - 2018-02 Security Monthly Quality Rambai Windows 8.1 uye Windows Sevha 2012 R2
KB4074597 - 2018-02 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows 8.1 uye Windows Sevha 2012 R2
Vose vatatu vakataura nyaya dzinotevera dzekuchengetedza:
Kuchengetedzwa kunovandudzwa ku Windows Graphics, Windows Kernel, Yakajairwa Log File System mutyairi, Microsoft Windows Tsvaga chinhu, uye Windows kuchengetedza uye faira masisitimu.
KB4074598 - 2018-02 Security Monthly Quality Rambai Windows 7 uye Windows Sevha 2008 R2
KB4074587 - 2018-02 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows 7 uye Windows Sevha 2008 R2
Zvose izvi zvinotarisa nyaya dzinotevera dzekuchengetedza:
KB4074736 -Cumulative chengetedzo yekuvandudza yeInternet Explorer: Kukadzi 13, 2018
KB4034044 - Kuchengetedzwa Kwekuvandudza kwe Windows Server 2008 uye Windows XP Yakapetwa inogadzirisa ruzivo rwekuzivisa kunetseka muVBScript.
KB4057893 - Kuchengetedzwa Kwekuvandudza kwe Windows XP Yakaputirwa SP3 yeX86-based Systems -
KB4058165 - 2018-02 Security Kwidziridzo ye Windows Server 2008 - inogadzirisa nyaya yekuchengetedza mu Windows Kernel iyo inogona kushungurudzwa kuitira ruzivo rwekuzivisa kurwiswa.
KB4073079 - 2018-02 Security Kwidziridzo ye Windows Server 2008 - inotaura kukwirira kwemikana yekushomeka mu Windows Yakajairwa Log File System mutyairi.
KB4073080 - 2018-02 Security Kwidziridzo ye Windows Server 2008 - Inogadzirisa ruzivo rwekuzivisa kushomeka uye kukwidziridzwa kweropafadzo kunetseka mu Windows tsanga.
KB4074589 - 2018-02 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows Yakapetwa 8 Standard uye Windows Server 2012
KB4074595 - 2018-02 Kuchengetedza Kugadziriswa kweAdobe Flash Player ye Windows 10 Version 1709, Windows 10 Version 1703, Windows 10 Version 1607, Windows 10 Version 1511, Windows 10 Version 1507, uye Windows 10
KB4074603 - 2018-02 Security Kwidziridzo ye Windows Server 2008 uye Windows XP Yakaputirwa
KB4074836 - 2018-02 Security Kwidziridzo ye Windows Server 2008 uye Windows XP Yakaputirwa
KB4074851 - 2018-02 Security Kwidziridzo ye Windows Server 2008
KB4074852 - 2018-02 Security Kwidziridzo ye Windows XP Yakaputirwa SP3 yeX86-based Systems
Windows Gadziridza Nhoroondo inoshuma kuti KB4054517 yakundikana kuisa nekuda kwekukanganisa 0x80070643. - Workaround: mhanyisa cheki chemanyorerwo ekuvandudzwa kuti uve nechokwadi chekuti hapana zvimwe zvekuvandudza zviripo.
Nemhaka yehutu hune humwe hutachiona hwehutachiona hwepurogiramu, izvi zvinongoshanda chete kumakombiyuta ayo antivirus ISV yakagadzirisa BUDZIRA REGKEY.
ADV180004 -February 2018 Adobe Flash Security Kugadziridza
KB4019276 -Kuvandudzwa kweWES09 uye POSReady 2009
KB4056446 - Kwidziridzo ye Windows Server 2008
KB4076492 - 2018-02 Yemhando Rollup ye .NET Sisitimu 3.5.1 pa Windows Yakapetwa Standard 7, Windows 7, uye Windows Sevha 2008 R2
KB4076493 - 2018-02 Yemhando Rollup ye .NET Sisitimu 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 pa Windows Yakapetwa 8 Standard uye Windows Server 2012
KB4076494 - 2018-02 Yemhando Rollup ye .NET Sisitimu 3.5, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 pa Windows 8.1, Windows RT 8.1, uye Windows Sevha 2012 R2
KB4076495 - 2018-02 Yemhando Rollup ye .NET Sisitimu 2.0, 3.0, 4.5.2, 4.6 pa Windows Server 2008
KB4077944 - 2018-02 Dynamic Dzidziso ye Windows 10 Version 1709
KB4077962 - 2018-02 Dynamic Dzidziso ye Windows 10 Version 1703
KB4078408 - 2018-02 Dynamic Dzidziso ye Windows 10 Version 1709
KB4087256 - 2018-02 Dzidzo ye Windows 10 Version 1709
KB4058258 - Windows 10 Version 1709 update yekuvaka 16299.214
KB890830 - Windows Yakashata Software Kubvisa Chishandiso - Kukadzi 2018
Bhuku guru risina kuchengeteka nekuvandudza nekugadzirisa.
KB4073291 - Windows 10 Version 1709 update yekuvaka 16299.201
Inowedzera kuwedzera kwekudzivirira kwe32-bit versions ye Windows 10 version 1709. Inotarisana nekambani yakatanga kubatwa mu KB4056892. Anoziva nyaya
KB4057144 - Windows 10 Version 1703 update yekuvaka 15063.877
Inogadzirisa mijenya yenyaya dzinosanganisira dzisingataurike mamiriro ehurongwa hweamamwe masisitimu eADD, kudhinda nyaya dzePDF muMicrosoft Edge, kana Windows Dziviriro nyaya dzekuchengetedza.
KB4057142 - Windows 10 Version 1607 update yekuvaka 14393.2034
Izvo zvinyorwa zvinosanganisira huri nani hunovandudzwa. Zvizhinji zvekugadzirisa, zvimwe zvakafanana KB4057144.
KB4075200 - Windows 10 Version 1511 update yekuvaka 10586.1358
Non-security update yeNovember update version ye Windows 10. Inosanganisira zvimwe zvigadziri.
KB2952664 - Kuenderana kuvandudzwa kwekuchengeta Windows up-to-date mu Windows 7
Microsoft yakabudisa zvinyorwa zvisiri zvekuchengetedza zveMiti yeHofisi vhiki rapera. Tarisa huongorori huno kana iwe usati watova.
KB4011686 - inogadzirisa kure kure kuita kodhi yekukanganisa muHofisi 2016.
KB4011143 -Fixes kure kure kode kuita zvinodzivirira muHofisi 2016.
KB4011690 - Patches kusagadzikana muMicrosoft Office iyo inogona kubhadharirwa kure kure kwema code.
KB3172459 -Kuchengetedza Kugadziridzwa kweMicrosoft Office kugadzirisa kure kure kuita kodhi zvinokuvadza.
KB4011707 - inogadzirisa kure kure kuita kodhi yekukanganisa muHofisi 2010.
KB3114874 - inogadzirisa kure kure kuita kodhi yekukanganisa muHofisi 2010.
Nzira yekukanganwa nekuisa yeFebruary 2018 kuchengetedzwa kwehutano
Zvese zvekuchengetedza zvigadziriso zve Windows inoparadzirwa kuburikidza Windows Kwidziridzo uye mamwe ekuvandudza masevhisi ekuparadzira kare. Vashandisi vanoda kuisa zvigadziriso ipapo ipapo vangangoda kumhanyisa cheki chemanyorerwo nekuti izvi hazviitike mune chaiyo-nguva.
Ita zvinotevera kuti utange cheki yekuvandudza:
Tapira pane Windows-key, nyora Windwos Gadziridza uye sarudza mhedzisiro.
Windows inogona kumhanyisa cheki otomatiki kana peji rovhura, kana mushure mekusarudza "tarisa kuti uwane mhinduro".
Mhinduro dzinofanirwa kubudiswa uye dzinoiswa kamwe chete mushure mekutsvaga. Kana ivo vasati vari, tsvagai pane bhatani rekutsvaga kuti utange hurongwa.
Aya anotevera anotaura nezveMicrosoft Update Catalog webhusaiti iyo iwe unogona kutora zvinyorwa semafaira ekutenderera.
KB4074598- 2018-02 Security Monthly Quality Rambai Windows 7
KB4074587 - 2018-02 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows 7
KB4074594 - 2018-02 Security Monthly Quality Rambai Windows 8.1
KB4074597 - 2018-02 Zvokuchengetedza chete Kuvandudzwa kwehutano hwe Windows 8.1
KB4074591 - Cumulative update ye Windows 10 Version 1511
KB4074590 - 2018-02 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Shanduro 1607 uye Windows Server 2016
KB4074592 - 2018-02 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 1703
KB4074588 - 2018-02 Kuwedzerwa Kuwedzerwa kwe Windows 10 Version 1709
February 2018 Security Updates kusunungurwa manotsi
The post Microsoft Security Updates February 2018 kubudiswa yakatanga kutanga gHacks Technology News.
Filed Under: atualisaçao mhepowos xp